Reeffi Etinnee Tishisekedii waggaa lamaa booda Beeljiyeemii DR Koongootti deebi'e - BBC News Afaan Oromoo
Reeffi Etinnee Tishisekedii waggaa lamaa booda Beeljiyeemii DR Koongootti deebi'e
Goodayyaa suuraa Namoonni yeroo simannaa reefficha gara buufata xiyyaaraatti deeman
Turtii waggaa lamaan booda, reeffi abbaa pirezedaantii DR Koongoo yeroo ammaa Beeljiyeemiirraa biyya isaatti deebi'uun awwaalamuuf jira.
Sababii wal-dhabdee pirezedaantii DR Koongoo duraanii Jooseef Kaabilaatiif reeffi Etinnee Tishisekedii waggaa lamaaf Beeljiyeem keessa akka turuuf dirqameera.
Etinnee Tishisekedii gaggeessaa garee mormitootaa keessaa isa beekamaa kan turan yommuu ta'u, Guraandadha 2017 uruii 84'tti Beeljiyeemitti boqote.
Biyya yeroo jalaqabaatiif aangoo nagaan dabarsuuf jirtu
DR Koongootti 'namootni 500 ajjeefaman'
DR Koongootti namoonni 900 ajjeefaman
Sababii walitti bu'insa pirezedaantiin biyyattii duraanii Joseef Kaabilaatiif reeffi namicha kana Biraaselsiin keessa ture.
Rakkoon kun garuu erga ilmi namicha du'ee kanaa, Feliiks pirezedaantii DR Koongoo ta'een booda furmaata argate.
Reeffi abbaa pirezedaantii ammaa biyyatti deebiyuu wan danda'uuf namoonni hedduun sirna awwaalchaaf walitti qabamaa jiru.
Nmoonni hedduun barreeffama "dursi namaaf" jedhu qabatanii buufata xiyyaaraatti Kamise darbe simachuuf eegaa turan jedha gabaasaan BBC Gaius Kowene magaalaa guddittii biyyattii Kinishaasaa irraa.
Namoonni simannaaf bahanii turan hedduunis uffataa adii uffatanii turan. Kun ammoo Tishisekediin malaammaltummaa irraa bilisaafi qulqulluudha jechuudha.
Reeffi nama kanaa istadiyeemii nama 80,000 qabachuu danda'u Kinishaasaatti argamu keessatti deggerootaan gaggeessaan taasifamaaf.
Goodayyaa suuraa Etinnee Tishisekedii
Duulli Etinnee Tishisekedii biyya abbaa isaatti awwaaluu taasifamaa ture sababii Feeliksi Tishisekedii dura pirezdaantii biyyattii kan ture Jooseef Kaabilaatiin rakkoon mudatee ture.
Deggertoota isaatiif, reeffi Etinnee Tishisekedii biyya dhufuun akka mootummaa duraa irratti injifannoo argachuutti ilaalama jedha gabaasan kun.
Erga reeffi kun Biraaselsii gara Kinishaasaa akka dhufu murtaa'eellee tiqqoo boodatti harkifachuun deggertoota haarseera.
Goodayyaa suuraa Deggertoonni yeroo reeffi Etinnee Tishisekedii dhufu itti eegan
Maddi Oduu Beeljiyeem akka jedhetti qindeessitoonni jalqaba Airbus A330 irraa bakka gahaa kireeffachuun imaltoota isaa warra miseensa paartii isaa turan 270 ta'an waliin reeffa sana biyya galchuuf turan.
Kun ammoo sababii balalii qideessuu irraa kan ka'een hin milkaa'iin hafeera.
Boodarra garuu jeettiin xiqqoon maatii isaa 10 qabatteen gara biyyaa yero fidan, warra kaan akkuma Beeljiyeemitti danqamanitti hafan. Jeettiin kun ammoo Pirezedaantii Toogoo Faure Gnassingbé tiin kireeffamteef jedhameera.
Kamisa darbe kana, yeroo xiyyaarri reeffa baattu Kinishaasaa qubattu jilli Pirezedaant Feliiks Tishisekediin durfamu simateera.
Reeffi kun hedduu halluu biyyattiitiin faayamee osoo namoota kumaatamaan lakkaamaniin simatamuu buufata xiyyaaraatti argameera.
Goodayyaa suuraa Saaxinii reeffa Etinnee Tishisekedii qabate
Sagantaan gaddaa kun tajaajila mana amantaatti gaggeeffamu, hawwaasa ballaa duratti agarsiisuufi hiriira deggeraa Jimaataa Istaadiyeemii magaalattii keessatti taasifamu dabalata.
Dubbi himaan koreen sirna awwaalcha kanaa Moos Lengaa, BBC'tti akka himanitti gaggeessitoonni amantaa reeffichi dhuguma Etinnee Tishisekedii ta'uu adda baasuuf qorannoo ni taasisu jedhan.
Goodayyaa suuraa Etinnee Tishisekeditiif sagantaan gaddaa akka biyyaatti qabameeraaf
Sirni awwaalchaa akka biyyaatti Sanbata magaalaa Nsele jedhamtu baha Kinishaasaatti argamtutti raawwatama. Kan Angoolaafi Ruwaandaa dabalatee bulchitoonni biyyoota ja'aa sirna awwaalcha kanaa irratti ni argamu jedhamee eegamaa jira.
Jireenya mormii siyaasaa
Etinnee Tishisekedii wagoota dheeraa siyaasa kessatti dabarsaniyyu yaaliin pirezedaantii ta'uu hin milkoofneef.
Osoo paartii mormituutti hin ijaariin dura bara Mobuutuu Seesee Sekoo bulchaa turetti ministira dhimma keessaa ta'uun tajaajilanii turan.
Erga waggootaaf hidhamee booda, paartii UDPS bara 1982 hundeessuun Mobutuudhaan si'a hedduu akka ministira muummeetti muudamaniiru.
Gaaga'amni namoomaa Koongoo 'kan Siiriyaa caale'
Bara 1997, Mobutuun garee loltootaa abbaa Joseef Kaabilaa, Laawurantiin durfamuun aangoorraa ari'aman.
Erga bara 2001 Laawurant Kaabilaa ajjeefamanii Etinnee Tishisekedii ammoo mormituu mootummaa haaraa sana ta'an.
Goodayyaa suuraa Ilma Etinnee Tishisekedii, Feeliks
Feelisk Tishisekedii filannoo baayyee hadhaa'aa ture bara darbe gaggeeffamee ture mo'achuun pirezedaantii biyyattii ta'an. Erga biyyattiin bara 1960 bittaa Beeljiyeem jalaa walaba baatee booda seena DR Koongoo keessatti aangoo karaa nagaan walitti dabarsanidha.
Filannoo DR Kongool: Gumaachituu dinagdee addunyaa olaanaatuu waan shan
DR Koongoo: Hookkarri kun namuummaa irratti yakka, jedha UN
'DR Koongoo: Sababa walitti bu'insa sabummaan namoonni 900 ajjeefaman
Ummati Koongoo warra Baha G/galeessaa caalaa gidirfama